ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးသန့်ရှင်းနည်း ဖြတ်တောက်ခြင်းညှပ်များမှညစ်ပတ်သောအရာများကိုဖယ်ရှားပါ။ ဂျပန်ကတ်ကြေး
ဇွန်အိုး သြဂုတ်လ 27, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 7
သံမဏိကိုဓားပြားများပြုလုပ်ရန်မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ ဓားရှည်ဓားများ၊ ကတ်ကြေးများနှင့်ဓားများပါ ၀ င်သည်။ ဤကိရိယာများသည်ခဏတာချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူတို့၏ပြတ်သားမှုနှင့်ချောမွေ့မှုကိုဆုံးရှုံးသည်။ ဓားများကိုထက်မြက်စေရန်ချွန်ထက်သောကျောက်များကိုအသုံးပြုသည်။ ကတ်ကြေးအတွက်ဤကိစ္စမဟုတ်ပါ။
ဒါဟာအားလုံးဆင်းလာပါတယ် ကတ်ကြေးဆံပင်ညှပ်။ အရာတွေကမတူဘူး။ ဆံပင်ညှပ်ဆရာနှင့်ဆံပင်ညှပ်ဆရာများသည်ကတ်ကြေးကိုသုံးလေ့ရှိသည်။ သူတို့သည်ပုံမှန်လိုအပ်သည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်သန့်ရှင်းရေးမရ။ ကျွမ်းကျင်သောဆံပင်ညှပ်ဆရာများကကတ်ကြေးကိုထက်မြက်စွာသန့်ရှင်းရေးလုပ်သင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
အွန်လိုင်းတွင်ရနိုင်သော DIY ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသော်လည်း၎င်းကို၎င်းတို့အားလုံးကိုသုံးရန်မထောက်ခံပါ။ မင်းရဲ့ကတ်ကြေးဖြတ်ဓါးအစွန်းတွေကိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်။ ကျောက်ခဲများကိုချွန်ထက်စေခြင်း၊ ၎င်းတို့ကိုအထောက်အကူပြုနေစဉ်၎င်းသည်လုပ်ဆောင်ရန်အရာမဟုတ်ပါ။ ဤကျွမ်းကျင်သောအကြံပေးချက်များကိုလိုက်နာပါ။ ဒါတွေကတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကောင်းတွေပါ ထက်စေ သင်၏ကတ်ကြေးကိုအိမ်၌သန့်ရှင်းပါ။
မင်းရဲ့ဆံပင်ဖြတ်တောက်တဲ့အမွှေးတွေကျိုးပဲ့ပျက်စီးနေလား၊ ညစ်ပတ်ပြီးပြုပြင်လို့မရရင်ဆံပင်ညှပ်အသစ်တစ်စုံကို ၀ ယ်နိုင်တယ် ဒီမှာ!
မည်သည့်အကြွင်းအကျန်ကိုမဆိုဖယ်ရှားရန်သင်၏ကတ်ကြေးကို Isopropyl အရက်နှင့်သန့်ရှင်းရန်အရေးကြီးသည်။
သင်မသုံးသင့်ပါ ပိုးသတ်ဆေး သင်၏ကတ်ကြေးများကိုသန့်ရှင်းစေရန်သို့မဟုတ်သန့်ရှင်းစေရန်
မှတ်ချက်။ မမှန်ကန်သောတင်းအားသည် RSI (Repetitive Strain Injuries) ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကတ်ကြေး၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးဖြတ်တောက်ခြင်းကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
မမျို၊ ရှူ၊ ဝါးမစားပါနှင့်။
၂။ သန့်ရှင်းရန် Chamois Cloth ကိုသုံးပါ
A Chamois ဖျင် သားရေထည်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အများစု ကတ်ကြေးအစုံနှင့်သေတ္တာများ သင်၏ကတ်ကြေးကိုသန့်ရှင်းစေရန်ပြုလုပ်ထားသောအ ၀ တ်ပါ ၀ င်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကိရိယာတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
သင်၏ဓား၏အပြင်ဘက်ကိုသုတ်ရန် chamois ကိုသုံးပါ။
သင်၏ဓား၏အတွင်းပိုင်းကိုသန့်ရှင်းရန် chamois ကိုသုံးပါ။
၎င်းသည်သင်တုန်းဓားကိုထိုးခြင်းနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ မင်းရဲ့ဆံပင်တွေ (သို့) chamois တွေကိုမဖြတ်ဖို့သတိထားရမယ်။
ဆီလိမ်းခြင်းသည်ကတ်ကြေးကိုသန့်ရှင်းစေသည်။ ၎င်းသည်ဝက်အူကို ကျော်လွန်၍ ဆံပင်နှင့်အညစ်အကြေးများကိုပြန်ဆွဲထုတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကတ်ကြေးသည်လက်မလက်စွပ်ကိုကိုင်ထားသည်။ အကြံပြုချက်များကို ၁၂ နာရီတွင်ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းထားပါ။
အခြားလက်တစ်ဖက်ကို ယူ၍ လက်ညှိုးကွင်းကိုယူပါ။ ယခုကတ်ကြေးဓားရှည်ကိုအခြားလက်ဖြင့် ၃၅ မှ ၄၅ ဒီဂရီအထိဖွင့်ပါ။ သင်၏လက်ညှိုးကွင်းကိုလွှတ်ပါ၊ ကတ်ကြေးသည်သူ့အလိုလိုပိတ်သွားလိမ့်မည်။
အကြံပေးချက်များအကြားကွာဟချက်မှာ ၁ စင်တီမီတာမှ ၂ စင်တီမီတာခန့်ရှိသင့်သည်။
အတူစတင်ကြပါစို့ သင်၏ကတ်ကြေးကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါမရ။ ဆံပင်ညှပ်ဆရာနှင့်ဆံပင်ညှပ်ဆရာများအသုံးပြုသောသန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံသူတို့ကအဲဒါကိုအဝတ်တစ်ထည်နဲ့သုတ်ဖို့အကြံပေးလိမ့်မယ်။ မလုံလောက်ပါဘူး။ သင်၏ဆံပင်ဖြတ်တောက်ကတ်ကြေးကိုသန့်ရှင်းစေရန်ထိရောက်သောသက်သေပြထားသော professional နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသုံးရပါမည်။ ဤအရာသည်သင်၏ကတ်ကြေးကိုသန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူပြီးထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာနှင့်ရေသည်အမှိုက်အားလုံးအတွက်မလုံလောက်ဘဲထပ်ခါထပ်ခါသုံးလျှင်တည်ဆောက်နိုင်သည်။ အညစ်အကြေးကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းစေရန်သုတ်ဆေးပါးပါးလေးကိုသုံးပါ။ မည်သည့်စေးကပ်ကျန်ကိုမဆိုဖယ်ရှားရန်သုတ်ဆေးကိုပိုသုံးပါ။ ထို့ပြင်မည်သည့်အညစ်အကြေး (သို့) အညစ်အကြေးကိုမဆိုကတ်ကြေး-ဓါးသွားများကိုသန့်ရှင်းပါ။
2. SPONGE ကိုသုံးပါ
၎င်းကိုသင်၏ကတ်ကြေး၏အခြေအနေ၊ သန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်များသုံးသင့်သောအရာကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ဓါးသွားများပေါ်တွင်တစ်ခါတစ်ရံကော်ကိုတွေ့နိုင်သည်။
ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးသည်အစွန်းအစရှိသည် ဖြစ်၍ ၎င်းကိုဝါဂွမ်းဘောလုံးနှင့်အရည်သုံးပြီးသန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူစေသည်။
ဓါးသွားများကိုသန့်ရှင်းရန်အထူးသဖြင့်ကြမ်းတမ်းသောဘက်တွင်သင်သုံးနိုင်သည်။ ဓါးသွားများသည်သံချေးတက်လာလျှင်၎င်းတို့ကိုသုတ်ရန်ဝါဂွမ်းလုံးကိုသုံးနိုင်သည်။ cotton ball ကိုဝိုင်ဖြူရှလကာရည်တွင်စိမ်ထားသင့်သည်။
မင်းရဲ့ကတ်ကြေးကိုသန့်ရှင်းပြီးထက်မြက်စေချင်ရင်ဓါးသွားကြားကအဆစ်ကိုဆီလိမ်းပေးဖို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ ဝက်အူနေရာကိုနူးညံ့သောအဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။ ဤအဆီကိုလစဉ်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သင့်သည်။ ဒါကဓားသွားတွေကိုချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ပွတ်တိုက်မှုမရှိအောင်သေချာအောင်လုပ်လိမ့်မယ်။ ဆီအနည်းငယ်ကိုသုံးပါ၊ ဒါပေမယ့်သင်ပြန်မသုံးခင်ဓါးသွားထဲကအဆီအားလုံးကိုသေချာဖယ်ရှားပါ။
1. SHARPENING ကျောက်ခဲ
ချွန်ထက်သောကိရိယာသည်သင်၏ဆံပင်ဖြတ်ကတ်ကြေးကိုထက်မြက်စေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်၏ကတ်ကြေးသည်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါ၊ မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမှမဖြစ်စေလိုလျှင်ကျွမ်းကျင်သူကိုခေါ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့ကတ်ကြေးကိုထက်ထက်မြက်မြက်ကျွမ်းကျင်စွာချွန်တာကအကောင်းဆုံးဘဲ၊ မင်းအိမ်မှာလည်းသုံးနိုင်တယ်။ ဤအရာကို whetstone ဟုခေါ်သည်။ ကျောက်၏မျက်နှာပြင်ကိုသန့်ရှင်းရန်ဆီ (သို့) ရိုးရိုးရေကိုသုံးပါ။ အစွန်အဖျားမှခြေရင်းအထိကျောက်၏အရှည်တစ်လျှောက်ကတ်ကြေး၏ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုခြေရာခံပါ။ ရန် သင်၏ကတ်ကြေးကိုထက်မြက်စေပါခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၅ ကြိမ်လောက်သုံးဖို့လိုလိမ့်မယ်။
2. လျှပ်စစ် ROTOR ကိရိယာ
rotary tool သည်သင်၏ကတ်ကြေးကိုထက်မြက်စေရန်အခြားအေးမြထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလျှပ်စစ်ကိရိယာသည်သင်၏ဖြတ်တောက်ကတ်ကြေးများကိုထက်မြက်စေရန်စံပြဖြစ်သည်။ ကတ်ကြေးကိုဓါးဖြင့်ကုပ်ရန်သုံးသင့်သည်။ ကြိတ်စက်ဘီးကို rotary tool နှင့်တွဲပါ။ ကြိတ်ထားသောကျောက်အား၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်မော်တာကိုဖွင့်ပါ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထပ်လုပ်ပြီးနောက်ထက်မြက်သောကတ်ကြေးကိုရရှိလိမ့်မည်။
3. SEWING PIN
သင်၏ဖြတ်တောက်ကတ်ကြေးဓားများကိုထက်မြက်စေရန်သင်အပ်ချုပ်တံကိုသုံးနိုင်သည်။ pin ကိုစတင်ဖြတ်ရန်ကတ်ကြေးကိုသုံးပါ။ ကတ်ကြေးပိတ်နေစဉ်၎င်းကိုပိတ်ပြီးဓါးသွားများမှ pin ကိုညင်သာစွာဆွဲထုတ်ပါ။
သင်ထက်သန်သောကတ်ကြေးဖြတ်တောက်ခြင်းအနားမရမချင်းဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ မည်သည့်သတ္တုအပိုင်းအစများကိုဖယ်ရှားရန်သင်ဓါးများကိုဓားချွန်ပြီးပါကအစိပ်စတစ်ခုနှင့်သုတ်ပါ။ သင်အပ်ချုပ်အပ်တစ်ချောင်းဖြင့်ထက်မြက်သောအခါသတ္တုအပိုင်းအစများသည်ဓါးသွားများပေါ်တွင်ကပ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်ဒဏ်ရာနှင့်အန္တရာယ်များကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်၏ကတ်ကြေးဓါးသွားများထက်မြက်ပြီးနောက်သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်သေချာပါစေ။
ဒါတွေဟာမင်းရဲ့ကတ်ကြေးဓားတွေကိုထက်မြက်စေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့အသက်သေဆုံးနည်းလမ်းတွေပဲ။ ဤနည်းလမ်းများသည်သင်၏ကတ်ကြေးဓါးသွားများကိုပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရစေနိုင်သဖြင့်သတိထားပါ။ သင့်ကတ်ကြေးများလုံခြုံပြီးသန့်ရှင်းစေရန်ဤအချက်များကိုဂရုတစိုက်လိုက်နာပါ။
ကျွမ်းကျင်သူများကသင်သည်ပုံမှန်သန့်ရှင်းပြီးသန့်ရှင်းကြောင်းအကြံပြုသည် သင်၏ညှပ်ညှပ်များကိုပိုးသတ်ပါမရ။ ဒါကမင်းရဲ့ညှပ်တွေကိုထိပ်တန်းအလုပ်တွေမှာသာထားပေးပြီးအဲဒါတွေကိုပိုကြာရှည်စေရုံသာမကသန့်ရှင်းရေးအကြောင်းပြချက်တွေအတွက်ပြည်နယ်အတော်များများမှာလိုအပ်လိမ့်မယ်။ သင့်ကတ်ကြေးကိုထိန်းသိမ်းရန်သင့်လျော်သောသိုလှောင်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုသည်အရေးကြီးသည်။
ဤ စေ့စပ်သေချာသောသန့်ရှင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဖောက်သည်များအကြားကတ်ကြေးကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့်ပိုးသတ်ရန်မကြာခဏလိုအပ်သည်။ ဆံပင်ကိုတစ်ရှူးနှင့်တစ်ပြိုင်နက်မဖြတ်ရန်လည်းကောင်းပါသည်။ ၎င်းသည်ဆံပင်ညှပ်ဆရာ (သို့) ဆံပင်ညှပ်ဆရာကဖြတ်တောက်ခြင်းမှကာကွယ်လိမ့်မည်။ အညှပ်များကိုရေနှင့်ခြောက်အောင်မဆေးဘဲသန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်းများ၊ ချွေးများမသုံးသင့်ပါ။ ၎င်းသည်ညှပ်များကိုမွဲခြောက်စေပြီးအရောင်မှေးမှိန်စေနိုင်သည်။
ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးများကိုသန့်ရှင်းရေးတွင်၎င်းတို့အားဆပ်ပြာနှင့်ရေတို့ဖြင့်ဆေးကြောခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့ကိုသန့်ရှင်းသောရေဖြင့်ဆေးကြောခြင်းဖြင့်အခြောက်ခံသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ quaternion ဒါမှမဟုတ် အရက်သန့်စင်ဆေးရည်ကိုပွတ်တိုက်ပေးပါ ညှပ်များကိုပိုးသတ်ရန်သုံးသင့်သည်။ လျှော်ပြီးအခြောက်ခံပြီးနောက် autoclave ကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်၏ဓါးသွားများဆီလိမ်းလိမ့်မည် သင်၏ကတ်ကြေး၏အသက်ကိုရှည်စေပါ ၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောလည်ပတ်မှုရှိစေရန်သေချာစေပါ။
ဆံပင်ညှပ်ဆရာများနှင့်ဆံပင်ညှပ်ဆရာများသည်ရက်ရှည်အကြာတွင်သူတို့၏ညှပ်စက်များကိုဆီလိမ်းလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်ညှပ်များကိုသံချေးတက်ခြင်းနှင့်တောင့်တင်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်၊ ချောမွေ့စွာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးထိရောက်မှုရှိသောဆံပင်ညှပ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။
တောင့်တင်းသောသို့မဟုတ်သံချေးတက်သောအမွှေးများသည်ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်လက်မသက်မသာဖြစ်စေပြီးဖောက်သည်အတွက်ညံ့ဖျင်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဆံပင်ညှပ်ဆီသည်ဆံပင်ဖြတ်တောက်ကတ်ကြေး၏အတွင်းမှကျန်ရှိသောဆံပင်များသို့မဟုတ်အခြားအပျက်အစီးများကိုဖယ်ရှားရန်ကူညီပေးသည်။ ကတ်ကြေးကို ၄၅ ဒီဂရီဖွင့်တာအကောင်းဆုံးပါ။ ထို့နောက်အလယ်အဆစ်တွင်သုံးသောဆီအနည်းငယ်ကိုတင်ပါ။
ဒါကဓါးတွေကိုအတူတကွကိုင်ထားလိမ့်မယ်။ သင်၏ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါးအနားသားများနှင့်ကတ်ကြေး၏ဘေးနှစ်ဖက်သို့ဆီသုတ်ရန်နူးညံ့သောအ ၀ တ်ကိုသုံးပါ။ အဆီပြန်လွန်းလျှင်ညှပ်များချောသွားနိုင်သည်။
သင်၏ဆံပင်ဖြတ်တောက်ခြင်းများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ခြောက်သွေ့ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ၎င်းတို့ကိုသန့်ရှင်းရန်၊ အခြောက်ခံပြီးမှဆီလိမ်းပါ။ ၎င်းသည်သူတို့၏အသုံးဝင်သောသက်တမ်းကိုရှည်စေပြီးသူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သင်၏ညှပ်များကိုသန့်ရှင်းပြီးကာကွယ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းတို့ကိုဒြပ်စင်များမှကာကွယ်ရန်စုပ်ယူနိုင်သောနူးညံ့သောအကာဖြင့်ကာကွယ်ထားသင့်သည်။ မင်းရဲ့ညှပ်တွေကိုသူတို့ရဲ့သိုလှောင်ခန်းထဲမှာသိမ်းထားရင်မင်းကူညီလိမ့်မယ်။ လှီးဖြတ်ခြင်း (သို့) အခြားကိရိယာများတစ်ခုနှင့်တစ်ခုထိလျှင်ဓါးသွားများပျက်စီးလိမ့်မည်ဟူသောအန္တရာယ်ကိုသင်အသုံးပြုသည်။ အမှုကိုခြောက်အောင်ထားပါ။
ဆံပင်ကိုဖြတ်နိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်းကွေးနိုင်လိမ့်မည်။ မှိုင်းများဖြစ်လာလျှင်သင်၏လှီးဖြတ်မှုများကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ချွန်ထက်သောကုမ္ပဏီ (သို့) ထက်မြက်စေရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
Professional sharpening ဆိုသည်မှာကတ်ကြေးကိုမည်သည့်ထိခိုက်မှုမှမဖြစ်စေသောကိရိယာများနှင့်နည်းစနစ်များကို သုံး၍ စနစ်တကျထက်မြက်သည်။
စက်တင်ဘာလ 06, 2021
ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးများသည်စျေးကြီးသည်၊ သင်သူတို့ကိုထပ်ခါထပ်ခါမဝယ်ချင်လျှင်သူတို့ကိုဂရုစိုက်ရန်လိုသည်။ ဟုတ်တယ်၊ သိသာထင်ရှားတဲ့ကြေညာချက်ဘဲ၊ ဒါပေမယ့်မင်းဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးအစုံတွေကိုဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတာဒီမှာဘလော့ဂ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးသူတို့ရဲ့ကတ်ကြေးတွေကိုဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမှန်းမသိရင်သူတို့ကတခြားအလုပ်တစ်ခုခုကိုစမ်းချင်လိမ့်မယ်။ သင်၏ကတ်ကြေးများကိုသန့်ရှင်းခြင်းသည်သင်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
သင်၏ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးကိုသန့်ရှင်းခြင်းသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ထက်မြက်သောအလေ့အကျင့်တစ်ခုနှင့်တူသည်။ ငါကြိုက်နှစ်သက်တာကမင်းရဲ့ကတ်ကြေးတွေကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အချိန်တိုင်းမှာမင်းရဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်လာသင့်တဲ့အဆင့် (သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဆီ၊ ထက်မြက်ခြင်းစသည်) ကိုဒီနေရာမှာအဆင့်ဆင့်လိုက်နာခြင်းအားဖြင့်ပရိုတိုကောတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်။